रिपोर्टबुधवार, आश्विन २६, २०७३
काठमाडौं उपत्यकामा हाइकिङको लागि हरेक याममा उपयुक्त हुने रुटहरू छन्।
लाँकुरीभञ्ज्याङ–नागीडाँडा–कुशादेवी हाइकिङ रुटमा पर्ने रयाले गाविसमा आलु रोप्न तयार पारिएको बारी । तस्वीरहरु: हाइक फर नेपाल र बिहावर क्षेत्र सरोकार समाज
एक दिनको यात्रा अर्थात् हाइकिङ। बिहान निस्केर बेलुका घर आइपुग्ने हाइकिङलाई 'डे टुर' पनि भनिन्छ। हिजोआज शहरको व्यस्त जीवनशैलीको तनावबाट शरीर र मन दुवैलाई 'रिफ्रेस' पार्न खोज्नेहरूबीच लोकप्रिय छ, हाइकिङ। काठमाडौं उपत्यकाको वरिपरि त्यस्ता धेरै हाइकिङ ट्रेलहरू छन्, जहाँ बिहान शहरबाट निस्केर बेलुकी मज्जाले घर फर्किन सकिन्छ।
शिवपुरी, नागार्जुन, गोकर्ण, सुन्दरीजल, तारेभीर, झोर, फर्पिङ, चम्पादेवी, चन्द्रागिरि, बुङ्गमती, गोदावरी, फूलचोकी, लाँकुरीभन्ज्याङ, साँगा, चाँगुनारायण, पनौती, नमोबुद्ध, नगरकोट, साँखु, बल्थली, गुण्डु, ककनी आदि त्यस्ता रुटहरू हुन्। वनजंगल, चराचुरुङ्गी तथा वनस्पति प्रेमीहरूका लागि त यी हाइकिङ ट्रेलहरू 'विशेष' नै मानिन्छन्।
२०६३ सालयता हरेक महीनाको अन्तिम शनिबार 'स्वास्थ्यका लागि पदयात्रा' संचालन गर्दै आएको प्रकृतिप्रेमी समूहका संस्थापक डा. उमेश श्रेष्ठ मौसम अनुसार रोज्न सकिने यी रुटमा हिंड्दा हरेक घन्टा फरक प्राकृतिक विशेषता र धार्मिक–सांस्कृतिक–ऐतिहासिक स्थलहरू भेटिने बताउँछन्।
शारीरिक कसरत र रमाइलोका लागि गरिने एकदिने हाइकिङमा नयाँ ठाउँ, वनस्पति, जीवजन्तु र मानिसको जीवनशैलीबारे धेरै कुरा थाहा पाइन्छ। दैनिक हिंड्न नभ्याउनेहरूले कम्तीमा महीनाको एकचोटि हाइकिङ जाँदा शरीरबाट पसिना निकाल्न र मजाले रक्तसञ्चार गराउन पाउँछन्।
उकालो–ओरालो ट्रेलमा हाइकिङ गर्दा स्वास्थ्यको लागि बढी लाभदायक मानिन्छ। “उकालो–ओरालो हिंड्दा खुट्टा दरिलो हुन्छ”, डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “रगत सफा हुन्छ, शरीरको स्टामिना बढ्छ र समग्रमा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्छ।”
हाइकिङ जाँदा एकदिन भए पनि शहरको धुवाँ–धूलो, कोलाहल र ध्वनि प्रदूषणबाट छुटकारा पाइन्छ। काठमाडौं उपत्यकाको एउटा विशेषता के भने, यहाँको शहरी क्षेत्रबाट एक घण्टाभन्दा कम समयमा कुनै हाइकिङ रुटको एकछेउमा पुगिन्छ।
यहाँका सबै हाइकिङ रुट कि वन क्षेत्र कि सांस्कृतिक ट्रेल कि त ती दुवैमा पर्ने हाइक फर नेपालका अध्यक्ष गणेश शर्मा बताउँछन्। “हाइकिङका लागि कुनै पनि रुट छान्नुहोस्, वनपाखा, हिमशृङ्खला र सांस्कृतिक सम्पदा त्यसमा छुट्दैनन्”, उनी भन्छन्, “दृश्यावलोकनसँगै स्वास्थ्यलाभ गर्नु कम गजबको कुरा हो त!”
वनपाखा, हिमशृङ्खला, सांस्कृतिक सम्पदा, जनजीवन आदि नियाल्दै उपत्यकालाई फन्को मार्न सकिने हाइकिङ ट्रेलहरू छन्। सँगै, इच्छुकहरूलाई ती ट्रेलमा पुग्न सघाउनेहरू पनि छन्। प्रकृतिप्रेमी समूह जस्तै शर्माको हाइक फर नेपालले पनि इच्छुकहरूलाई हाइकिङ गराउन थालेको एक वर्ष भयो। अहिले त ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले पनि हाइकिङको प्याकेज चलाउन थालेका छन्।
हाइकिङ डेस्टिनेशन छान्दा सकेसम्म नयाँ तर सुरक्षित ठाउँ रोज्नुपर्छ। समूहमा गरिने हाइकिङमा सबैको रुचिलाई ख्याल गर्नुपर्छ। सुरक्षा र आइपर्ने सम्भावित समस्यालाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा १० जनाको समूहमा जानु राम्रो हुन्छ। हिमाल, प्रकृति, धार्मिक–सांस्कृतिक स्थल, वनस्पति, वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी हेर्ने चाहना एउटै हाइकिङमा पूरा नहुन सक्छ।
तसर्थ, सकेसम्म बढी जानकारी बटुलेर हाइकिङ रुट छान्नुपर्छ। डेस्टिनेशन उपयुक्त भए यात्रा रमाइलो र रोमाञ्चक हुन्छ। हाइकिङको मज्जा यसैमा हुन्छ।
हिजोआज जताततै सडक पुगेको छ। सडकभन्दा अलि वरपरको ट्रेल छान्दा हाइकिङ राम्रो हुन्छ। ट्रेल र मौसम अनुसारको तयारी पहिल्यै गर्नुपर्छ। हाइकिङमा सन ग्लास, तौलिया, क्याप, ह्याट, सन प्रोटेक्सन क्रिम लैजानुपर्छ। जुत्ता र पोशाक हिंड्न सजिलो हुने किसिमको हुनुपर्छ।
वर्षात्मा छाता र रेनकोट अनिवार्य नै हुन्छ। त्यस्तै, खानेपानी, हलुका खानेकुरा, फलफूल, प्राथमिक उपचारका सामग्री, म्याप, लट्ठी, क्यामेरा आदि बोक्नुपर्छ। यसरी तयारीका साथ गरिएको हाइकिङ पक्कै सम्झ्नलायक रहन्छ।
अधिकतम उँचाइः २,५६३ मीटर
लाग्ने समयः ६/७ घण्टा
हाइकिङ दूरीः १६ देखि १८ किमीसम्म
विशेषताः बूढानीलकण्ठ मन्दिर, नागी गुम्बा, पाँच सयभन्दा बढी प्रजातिका बोटबिरुवा, लाङटाङ हिमाल रेञ्ज।
काठमाडौंको उत्तरमा पर्ने शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको शिवपुरी डाँडामा पुग्ने तीनवटा ट्रेल छन्। बूढानीलकण्ठको पानीमुहानबाट निकुञ्ज प्रवेश गरेपछि दायाँ वाग्द्वार (विष्णुमतीको मुहान) हुँदै या बायाँतर्फको रुटबाट डाँडामा पुगिन्छ। वाग्द्वारबाट पनि शिवपुरी पुग्ने दुइटा रुट छन्। पानीमुहानबाट शुरू गरिने हाइकिङको आकर्षण नागी गुम्बा हो।
घना वनमा उकालो यात्रा गर्दै शिवपुरी डाँडामा पुग्दा पुरस्कारको रूपमा आँखासामु हिमशृङ्खलाको दृश्य आइपुग्छ। चराचुरुङ्गी, पुतली, विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिबारे जान्न पनि शिवपुरीको हाइकिङ उपयुक्त मानिन्छ।
अधिकतम उँचाइः २,१२८ मीटर
लाग्ने समयः ५/६ घण्टा
हाइकिङ दूरीः ९ किमी
विशेषताः जामाचो गुम्बा, स्तूप, काठमाडौं उपत्यका र हिमाली दृश्य।
शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको नागार्जुन हाइकिङ बालाजु वाइपासको फूलबारीबाट शुरू गर्नुपर्छ। उपत्यकाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने यो रुटको पूरै हिंडाइ घना जंगलभित्र हुन्छ। डाँडामा जामाचो गुम्बा र भ्यू टावर छ। चरा अवलोकन र योग–ध्यानका लागि नागार्जुन प्रख्यात छ। डाँडाबाट लाङटाङ, अन्नपूर्णलगायतका हिमशृङ्खला, नुवाकोटका गाउँ र काठमाडौं उपत्यका हेर्न नागार्जुन हाइकिङ धेरै उपयुक्त छ।
अधिकतम उँचाइः २,२८५ मीटर
हाइकिङ दूरीः १४ किमी
विशेषताः टौदह, फर्पिङ गुम्बा, लप्सीको पकेट क्षेत्र, नेवार र तामाङ समुदायको बस्ती।
उपत्यकाको दक्षिणपश्चिममा रहेको चम्पादेवी डाँडा काठमाडौं र मकवानपुर जिल्लाको सीमाना पनि हो। चोभारको टौदहबाट हाइकिङ शुरू गरेर दक्षिणकाली मन्दिर नजिकको पुरानो नेवारवस्ती फर्पिङ नियाल्दै त्यही ट्रेलबाट फर्कने गरिन्छ। चम्पादेवीबाट गौरीशंकर, लाङटाङ, अन्नपूर्णलगायतका हिमाली शृङ्खला देखिन्छ। कीर्तिपुरको मच्छेगाउँबाट पनि चम्पादेवी जाने अर्को रुट छ।
समयः ५/६ घण्टा
विशेषताः पुरानो नेवार बस्ती,
मच्छेनारायण मन्दिर, काठमाडौं
उपत्यका र हिमाली दृश्य।
चन्द्रागिरि हाइकिङको लागि कीर्तिपुरको मच्छेगाउँबाट यात्रा शुरू गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट छापडाँडाहुँदै चन्द्रागिरि पुगिन्छ। चन्द्रागिरिमा उपत्यका आक्रमणको बेला कालु पाँडेले बनाएको बंकर छ, जसलाई हिजोआज 'कालु पाँडे फोर्ट' भनिन्छ। थानकोटको गोदामचौरबाट चन्द्रागिरिको डाँडा निस्कने अर्को ट्रेल छ। त्यहाँबाट सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घा, मनास्लु, दोर्जे लाक्पालगायतका हिमालहरू देखिन्छ। समय निकाल्न सक्नेहरूले गोदामचौरबाट मकवानपुरको चित्लाङ पुगेर एकरात बसी इन्द्रसरोवरमा बोटिङको मजा लिन पनि सक्छन्।
अधिकतम उँचाइः २,७६५ मीटर, लाग्ने समयः ७/८ घण्टा, हाइकिङ दूरीः १८ किमी,
विशेषताः गोदावरी बोटानिकल गार्डेन, हिमशृङ्खला र उपत्यकाको दृश्यावलोकन।
उपत्यकाको सबभन्दा अग्लो डाँडा फूलचोकीको हाइकिङलाई 'टफ' मानिन्छ र यसको राम्रो व्यवस्थापन पनि हुनसकेको छैन। गोदावरीबाट शुरू हुने हाइकिङ ट्रेलले बीचबीचमा सडक भेट्छ। फर्किंदा त्यही रुट प्रयोग गरिन्छ। एकान्त र 'टफ' भए पनि उष्णप्रदेशीय पहाडी वनको यात्राले फूलचोकीको हाइकिङलाई विशेष बनाउँछ। बाटामा अनेक प्रजातिका सुनाखरी र गुराँसको वन भेटिन्छ। चराको कलरव र पुतलीको रमिता फूलचोकी यात्राको अर्को विशेषता हो। हिउँदमा एकपटक हिउँले छोपिने डाँडाबाट सगरमाथा, गौरीशंकर, गणेश, लाङटाङ, मनास्लु, अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाका साथै काठमाडौं उपत्यकाको विहंगम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ।
अधिकतम उँचाइः २,१७५ मीटर
हाइकिङ दूरीः १६/१७ किमी
समयः ७/८ घण्टा
विशेषताः चाँगुनारायण मन्दिर, कृषि क्षेत्र, पुराना नेवारी बस्ती, हिमशृङ्खला।
काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वी कुनामा पर्छ, पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट। नगरकोट क्षेत्रमा हाइकिङको मज्जा लिन साँखु, सुन्दरीजल, चाँगुनारायण, भक्तपुर, बनेपा र धुलिखेलबाट यात्रा गर्न सकिन्छ। यो हाइकिङमा सगरमाथा, मनास्लु, गणेश, लाङटाङलगायतका हिमाली शृङ्खला देखिन्छ। नगरकोट हाइकिङको लागि चाँगुनारायण–तेलकोट ट्रेल सबभन्दा चल्तीमा छ। यो ट्रेलबाट लिच्छवि राजा हरिदत्त बर्माले बनाएको प्रसिद्ध चाँगुनारायण मन्दिरबाट गाउँघर र खेतीपाती हेर्दै नगरकोट पुगिन्छ। एकरात नगरकोटमा बिताउन चाहनेहरूका लागि त यो ट्रेल झनै उपयुक्त छ।
अधिकतम उँचाइः २,३६६ मीटर
विशेषताः बज्रयोगिनी मन्दिर, पुरानो नेवार र तामाङ बस्ती, कृषि क्षेत्र, मणिचूड ताल।
काठमाडौं उपत्यकाको प्राचीन बस्तीमध्येको एक हो साँखु। यहाँबाट बज्रयोगिनी हुँदै मणिचूडसम्म रमाइलो हाइकिङ गर्ने रुट छ। नयाँ–पुरानो बस्ती, खेतबारी, वनपाखा यो रुटका विशेषता हुन्। साँखुलाई यात्राको शुरू या अन्त्यविन्दु बनाएर चारवटा रुटमा हाइकिङ गर्न सकिन्छ। चाँगुनारायणबाट तेलकोटहुँदै साँखुसम्मको रुट पनि छ। त्यस्तै, मणिचूडबाट चिसापानी र शिवपुरी पुग्ने पनि चल्तीमै छ।
अधिकतम उँचाइः १८०० मीटर
हाइकिङ दूरीः १२.५ किमी
विशेषताः नमोबुद्ध स्तूप, सुन्तला खेती
तामाङ वस्ती, हिमाली दृश्य।
धुलिखेलबाट काभ्रेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नमोबुद्धसम्म हाइकिङ गर्न सकिन्छ। धुलिखेलको बतासेडाँडाबाट नमोबुद्धहुँदै काभ्रेभञ्ज्याङ्ग निस्कने अर्को रमाइलो ट्रेल छ। पनौतीको धापासीबाट नमोबुद्धसम्मको अर्को ट्रेल पनि छ। नमोबुद्धबाट गौरीशंकर, लाङटाङ, दोर्जे लाक्पा, गणेश, मनास्लुलगायतका हिमालको अवलोकन गर्न सकिन्छ।
अधिकतम उँचाइः १,९७७ मीटर
विशेषताः गाउँबस्ती, वन, हिमाल र सूर्योदय।
ललितपुरको लाँकुरीभञ्ज्याङबाट उपत्यकाका तीनवटै शहरको विहंगम दृश्य देखिन्छ। यात्रा हुन्छ– सल्ला, कटुस र लालीगुराँसको वनबीचबाट। प्याराग्लाइडिङ गर्न र सूर्योदय हेर्न पनि लाँकुरीभञ्ज्याङ उपयुक्त छ। लुभूबाट लाँकुरीभञ्ज्याङहुँदै सूर्यविनायक निस्कने र ढुङ्गिनबाट लाँकुरीभन्ज्याङ पुगेर पुनः ढुङ्गिन फर्कने चल्तीका ट्रेलहरू छन्। काभ्रेको कुशादेवी, भक्तपुरको दधिकोट वा अनन्तलिङ्गेश्वर र गोदावरीबाट पनि लाँकुरीभञ्ज्याङको हाइकिङ गर्न सकिन्छ। यी सबै ट्रेल १०/१५ किमीका छन्।
उँचाइः १४०० मीटर
हाइकिङ दूरीः १० किमी
विशेषताः नेवार र ब्राह्मण बस्ती, गाउँको यात्रा, चार नदीका चार झोलुङ्गे पुल र खेती अवलोकन।
काभ्रेको बल्थली अहिले पर्यटकीय गाउँ बनेको छ। हरियाली र शान्त गाउँले जनजीवन रुचाउनेहरू बल्थली हाइकिङमा जान्छन्। खोपासीबाट बल्थली, रोसी, लड्कु खोला, साना गाउँहुँदै खोपासी आएर यात्रा पूरा गर्न सकिन्छ। लामो हाइकिङ गर्नेहरू काभे्रभञ्ज्याङहुँदै बल्थली आउन सक्छन्। बल्थली डाँडाबाट सगरमाथा, गणेश, नुम्बुर, लाङटाङ आदि हिमालहरू लस्करै देखिन्छ। बल्थली डाँडामुनि लड्कु खोला छ। त्यस नजिकैको गुफाभित्र लड्केश्वर महादेवको मन्दिर छ। एउटै हाइकिङमा यी सबै देख्न सकिन्छ।
अधिकतम उँचाइः २,२७८ मीटर
विशेषताः सूर्यविनायक, पाइलटबाबा आश्रम, नेवार र तामाङ बस्ती।
भक्तपुरको गुण्डूबाट सल्लाको वन अवलोकन गर्दै यात्रा गरेर पाइलटबाबा आश्रम पुगिन्छ। यो रुटमा घ्याम्पे डाँडाहुँदै प्राकृतिक छहरायुक्त आशापुरी महादेवको मन्दिर पुगिन्छ। भक्तपुर र काभ्रे जिल्लाको सीमामा रहेको आशापुरी महादेवबाट फर्केर साँगा झर्न सकिन्छ। वन र ग्रामीण जनजीवन यो हाइकिङ रुटको थप विशेषता हो।
अधिकतम उँचाइः १,२८० मीटर
विशेषताः वाग्मतीको मुहान, झरना, दह, तामाङ र गुरुङ बस्ती।
सुन्दरीजल वनभोज र घुमघामको लागि त्यसै पनि प्रसिद्ध छ। वनले भरिभराउ यो क्षेत्रमा झरना हेर्न वा पानीमा खेल्न पाइन्छ। सुन्दरीजलबाट मूलखर्क हुँदै ओख्रेनी जाने र चाँगुनारायणबाट सुन्दरीजल आउने चल्तीको हाइकिङ रुट छ। सुन्दरीजलबाट शिवपुरी या नगरकोट हाइकिङ पनि गर्न सकिन्छ। मूलखर्कबाट सिन्धुपाल्चोकको चिसापानीहुँदै झुले जाने अर्को हाइकिङ ट्रेल पनि छ। त्यसका लागि एक रात चिसापानीमा बस्नुपर्छ।
अधिकतम उँचाइः २,१६५ मीटर
हाइकिङ दूरीः १५ किमी
विशेषताः मनकामना मन्दिर, थानापाटी गुफा, हेटौंडा, सिमरा र काठमाडौंको दृश्य।
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका आक्रमणका लागि उत्तरी ललितपुरको दलचौकीबाट सेना पठाएको भनाइ छ। अहिले बिर्खेधाराबाट मनकामना मन्दिर, थानापाटी गुफा हुँदै दलचौकी डाँडासम्म हाइकिङ गर्ने चलन बढेको छ। हिमशृङ्खला र तराईका फाँटको दृश्यावलोकन गर्न दलचौकी हाइकिङ धेरै उपयुक्त छ। दलचौकी पुग्ने अर्को चल्तीको बाटो टीकाभैरवबाट पनि छ।
लाग्ने समयः ४/५ घण्टा
हाइकिङ दूरीः १३ किमी
विशेषताः कालु पाँडेको समाधि, शिव मन्दिर, इन्द्रदह, स्वीट्जरल्याण्ड पार्क।
काठमाडौंको सीतापाइलाबाट भीमढुङ्गाहुँदै पुगिने इन्द्रदह नै दहचोक हो। सामुदायिक वनको बीचबाट जाने यो ट्रेलमा धादिङका केही ठाउँ र काठमाडौं उपत्यकाको रमणीय दृश्य देखिन्छ। कालु पाँडेको समाधि, शिव मन्दिर, स्वीट्जरल्याड पार्क आदि इन्द्रदह हाइकिङमा हेर्न पाइने खास ठाउँ हुन्।
अधिकतम उँचाइः १,८०० मीटर
विशेषताः भुवनेश्वरी मन्दिर, पञ्च माने, ओशो तपोवन, नुवाकोटको दृश्य, झोर झरना।
काठमाडौंको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको तारकेश्वर महादेव मन्दिरको हाइकिङ बालाजु बाइपासको तीनपिप्लेबाट शुरू हुन्छ। भुवनेश्वरी मन्दिरबाट पञ्च माने हेर्दै अगाडि बढ्दा तारकेश्वर महादेवको मन्दिर पुगिन्छ। शिवपुरी–नार्गाजुन निकुञ्जभित्रको यो मन्दिरबाट हिमशृङ्खलासँगै काठमाडौं उपत्यका र त्रिशूली बजार देखिन्छ। यो ट्रेलमा गुर्जुभन्ज्याङहुँदै झोर झरना पुगेपछि हाइकिङ सकिन्छ।